နော်ဝေနိုင်ငံရောက် အညတရ ရဟန်းတစ်ပါး (အတွေးအမြင်နှင့် အတွေ့အကြုံ)
ရွှေဝါရောင်လှိုင်း (ငြိမ်းချမ်းရေး အတွေးစာစဉ်) (The Saffron Wave) (Throughful Expressions of Peace)
ဦးဃောသိတ , ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ (တောင်စွန်း) , အရှင်ဣဒ္ဓိက (M.A) , အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) , ရွှေဝါရောင် အရှင်ထာဝရ (နော်ဝေ) , မင်းသုည (ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်) , ဘုန်းဘုန်း ဦးကောဝိဒ , ဦးရာဝိက , တမာန်တော်ဓမ္မိဿရ , ဒေါက်တာဉာဏုတ္တရ , ဦးသောဘိတ (အလင်္ကာကြယ်) , ဒေါက်တာအရှင်သြဘာသ (သာသနာတက္ကသီလ ဓမ္မာစရိယ) , B.A. (Buddhism) , Dip.(B.Dh.) , B.A (B.Dh.) M.A. (B.Dh.) , Ph.D , ပန်းဥယျာဉ်ဆရာတော် , အရှင်ဇယဒိသ (ဦးဇင်းသုည) , အရှင်ဉာဏ် (နေထွန်း - မန်း)
ဝိဘဇ္ဇ ပဲ့တင်သံ (အတွဲ ၂)
ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ (တောင်စွန်း) , မင်းဝေနိုင် (ဟင်္သာတ) , မောင်ခိုင်တည် , ဓမ္မဂင်္ဂါ , အရှင်သုမင်္ဂလ (စစ်ကိုင်း) , ဓမ္မပီယ အရှင်ဉာဏောဓယ , ဆောင်းဝေ (နတ်မောက်) , အရှင်ဝိသုဒ္ဓိ (စစ်တောင်းအရှေ့) , အရှင်သီရိဒတ္တာလင်္ကာရ (ဒွိပိဋကဓရ - ဒိပိဋကကောဝိဒ) , မိုးသု (မန္တလေး) , အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) , ရွှေဝါရောင် အရှင်ထာဝရ (နော်ဝေ) , မင်းသုည (ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်) , ကိုသစ် (သီတဂူ) , ဘုန်းဘုန်း ဦးကောဝိဒ , ဦးရာဝိက , လင်းနေ (နမော) , သန္တိသုခဆရာတော် (ဒါးက) , ဘုန်းလူသစ် , အရှင်ဇဝန (နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား) , တမာန်တော်ဓမ္မိဿရ , အရှင်ဥတ္တမ (သစ္စာရွှေစည်) , ဦးဇင်းဂျောင်းဂျောင်း
ဝိဘဇ္ဇ ပဲ့တင်သံ (အတွဲ ၁)
ဓမ္မဒူတ ဒေါက်တာအရှင်ပညိဿရ , ဓမ္မပီယဆရာတော် အရှင်သံဝရာလင်္ကာရ , ဓမ္မဘေရီ အရှင်ဝီရိယ (တောင်စွန်း) , ဓမ္မဂင်္ဂါ , သာအေးည , ကံထွန်းသစ် , မိုးသု (မန္တလေး) , အရှင်စန္ဒိမာ (မွန်စိန်တောရ) , ဦးသောဘိတ (ဘဝအလင်း) , ရွှေဝါရောင် အရှင်ထာဝရ (နော်ဝေ) , မြဝတီမင်းကြီး ဆရာတော် , အရှင်ဉာဏိဿရဘိဝံသ (သန္တိသုခဆရာတော် (ဒါးက)) , အရှင်ဇဝန , မင်းသုည (ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်) , သစ္စာနွယ် (ကျောက်တိုင်) , အရှင်ဓမ္မိဿရ , ကိုသစ် (သီတဂူ) , ဘုန်းဘုန်း ဦးကောဝိဒ , အရှင်ဓမ္မ (ဒေလီ) , အရှင်ရာဟုလာ (မစိုးရိမ်) , အဝေရာမောင် , ဦးရာဝိက , အရှင်နိယာမ (အောင်သာဝတီ) , အရှင်ဉာဏိန် (မစိုးရိမ်) , အရှင်နန္ဒမာလာ (မဂဓတက္ကသိုလ်) , ဝတီနွယ်
ထာဝရ ရွှေဝါရောင် (ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကြီးအတွင်း ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သော ဦးဆောင်သံဃာတစ်ပါး၏ ကိုယ်တွေ့)
All of ရွှေဝါရောင် အရှင်ထာဝရ (နော်ဝေ) (Myanmar Books)513.75